भैंसी पालेर मासिक ८ लाख कमाउँछन् पोखराका दीपक – Online Khabar
२०७४ असोज २५ गते २०:४९
sir number dinus na boos ko
२. इन्टु मिन्टु लन्डनमाः नयाँ गातामा पुरानो किताब
३. मोडरिक, क्रुस र क्यासेमिरो इतिहासकै उत्कृष्ट ?
४. सरकारको लाचारी र व्यवसायीको दादागिरीमा चेपिए जनता
५. सुन पसल फुटाएर चोरी गर्ने चारजना पक्राउ
६. नेपाल प्रहरीका तीन डीआईजीको एआईजीमा बढुवा
७. खेलाडीको कमाइः सन्दीपको ६ महिनाको आम्दानी करोड, अरुको कति ?
८. उपत्यकाका नदीको छेउमा नजान आह्वान
९. ८ बुँदे सहमतिपछि खुर्सिदको शव उठाइयो
१०. अमेरिकामा नेपालीमाथि गोली प्रहार, १ को मृत्यु, १ घाइते
११. प्रतिबन्धको नाममा अमेरिकाले आगोसँग खेल्दैछः रसिया
१२. वीरगञ्जमा एक पुरुषको शव फेला
क्लब क्रिकेटमा फर्किए स्मिथ र वार्नर
असुरक्षित यौन सम्पर्कले बढाउन सक्छ, यौन रोगको जोखिम
‘यता ब्ल्याकमा टिकट विक्री, उता टिकट नपाएर दर्शकको तछाडमछाड
भैंसी पालेर मासिक ८ लाख कमाउँछन् पोखराका दीपक
२०७४ असोज २५ गते ११:४४ मा प्रकाशित
२५ असोज, पोखरा । मलाई अमेरिका यही, मलाई जापान पनि यही … भनेजस्तै भएको छ पोखरा नयाँबजारका युवा दीपक तिमिल्सिनालाई । गायक पशुपति शर्माको गीतमा उनी१ सय ७२ वटा भैंसी पालेर बसेका छन् र न अमेरिका जाने चाहना छ, न त जापान वा बेलायत नै ।
दुई दशकअघि हेटौंडाबाट पोखरा पसेका दीपक अहिले पोखराका सफल युवा उद्यमी मध्येका एक हुन् । नयाँबजारमा ३ तले घर बनाएका छन् भने एग्रो प्रोडक्ट र करीब २ सय भैंसी भएको जानकी एग्रो फार्म सञ्चालन गरेका छन् । एग्रो फार्मबाट मात्रै खर्च कटाएर मासिक ८ लाख कमाउँछन् । यद्यपि लगानीको ब्याज घटाउने हो भने आम्दानीको आधा मात्र खुद मुनाफा हुने उनी बताउँछन् ।
तिमिल्सिनाले सञ्चालन गरेको एग्रो फार्ममा १ सय ७२ वटा भैंसी छन्, जसबाट दैनिक करीब ८ सय लिटर दुध उत्पादन हुन्छ । त्यो दुध बजार पुर्‍याउँदा १२० रुपैयाँप्रति लिटरमा बिक्री हुन्छ ।
यसरी हेर्ने हो भने उनले मासिक करीब २९ लाख कमाउँछन् । तर, करीब २१ लाख जति भैंसीको दाना र मजदुरलाई तलब दिदा खर्च हुन्छ । तिमिल्सिनाको भैंसी फार्ममा मात्र १७ जना कामदार छन् । माथिल्लो फार्ममा १३ र तल्लो फार्ममा ४ जना कामदार रहेको उनले बताए ।
तिमिल्सिना आफैं पनि भैंसीको स्याहार सुसारदेखि दुध दुहुने काममा खट्छन् । भन्छन्, ‘अरु विदेशमा गएर भाँडा माझ्छन् । म आफ्नै फार्ममा भैंसी दुहुँदा रमाउँछु, मलाई काम सानो ठूलो लाग्दैन ।’
तिमिल्सिनाले पोखराको ४ ठाउँबाट दुध बेच्छन् । उनका अनुसार उत्पादन गर्न मात्र गाह्रो हो, बजारको कुनै अभाव छैन ।
तिमिल्सिनाले भैंसी पालनमा हालसम्म ४ करोड लगानी गरिसकेका छन् । निकट भविष्यमै र्फममा भैंसीको संख्या २ सय ५० पुर्‍याउने उनको योजना छ । एउटा भैंसीका लागि करीब १ लाखमा लगानी गर्नुपर्छ ।
भारतको विहार, युपी तथा नेपालको बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही गायतका ठाउँहरुबाट भैंसी ल्याउने गरेको उनले सुनाए । ‘यसरी ल्याएको भैंसी ब्याएपछि ६ महिनादेखि ९ महिनासम्म दुध दिन्छ’ उनले भने ।
दुध दिन छाडेपछि मासुका लागि बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । किनकी मुर्रा, गुजराती, पञ्जावी क्रसलगायतका भैंसी एकपटक ब्याएपछि फेरि बथान जाने सम्भावना बिरलै हुने उनको अनुभव छ ।
निगमले अब अप्ठेरो अवस्थामा सेनाका चालकको सहयोग लिने
बगर कब्जा गर्न हानाथाप